Ho an'ny Lisea Faravohitra, tsy mbola tapa-kevitra hanohy na hamarana ny fianarana velively ny mpampianatra ka nampodiana indray ny mpianatra. Nandefa ritsoka sahady ny sekoly fa mety hiafara amin'ny fanambarana ny naoty azo telo volana voalohany sy faharoa no ho solon'ny naoty hifindrana na hamerenana kilasy eo anatrehan’ny mbola fikatsoana. Ny mpianatra hanala fanadinana kosa tsy misy tokotaniny fa miandry izay mety ho fivoaran'ny toe-draharaha. Mety hifarana tsy misy fanadinana fisondrotana kilasy ny an'ny kilasy faharoa sy voalohany. Toa tsy mbola misy akony aloha ny fanaovan-tsonia fifanarahana ho famahana ny olan'ny mpampianatra nifanaovan’ny teo anivon’ny primatiora, niampy ny minisitera ary ny solontenan'ny sendika. Niantso ny mpampianatra rehetra hanohy ny asa hanatanterahana ny fanadinam-panjakana kosa ny filohan’ny sendikan’ny Mpampianatra ANEFFA, Elidio Randrianjafy omaly. Milaza ny hiverina hampianatra amin’izay izy ireo ary hanao ny fomba rehetra hanatanterahana ny fanadinana. Hanaiky sy hihaino izany ve ireo mpanabe mbola mitokona ?